फिगरकै कारण भाइरल १४ वर्षिया फुच्ची को हुन् त् आखिर ? -
फिगरकै कारण भाइरल १४ वर्षिया फुच्ची को हुन् त् आखिर ?
कसैलाई प्रकृतिले बरदान नै दिएको हुन्छ । उसलाई न उमेरले नै छेकेको हुन्छ । अहिले अलेक्जेन्डरो नाम गरेकी एक फुच्ची केटी खुबै भाइरल छिन् । उनी भाईरल हुनुको कारण हो उनको फिगर । तस्बिर देख्दा धेरैजसोलाई दिमागले धोका दिन्छ । बच्चा भएर पनि उनको फिगर यस्तो छ कि लाग्छ उनी कुनै अर्धबैँसे युवती हुन् ।
तर, होइन उनी हुन् मात्र १४ वर्षिया बालिका अलेक्जेन्डरो टोरेगोसो साँग हुन् । इन्डोनेसियाली १४ वर्षिया साँगको चर्चा चुलिएको छ । अलेक्जेन्डरो टोरेगोसो अहिले समाजिक संजालमा भाइरल भएकी छिन् । सानो उमेरमै फिगरका कारण उनी फेसबुकमा भाइरल भएकि हुन् । उनको यो फिगरका कारण धेरैले प्रतिक्रियाहरु दिदै आएका छन् ।
इन्डोनेसियाको अनलाईन ओकेजोन लेख्छ,निश्चित रूप देखि वातावरण, इन्टरनेट, र यस्तै विभिन्न कारणहरुले बच्चाको शरिरको बनावटमा प्रभाव पर्दछ ।अलेक्जेन्डरोको स्वामित्वमा रहेको इन्स्ट्रग्राम र फेसबुकमा धेरैँ फलोअर्स पनि छन् । उनको अनुहार वास्तवमा सुन्दर छ । लामो कपालको संयोजन, मिलेका आँखीभुई, मीठो मुस्कान र थुप्रै कारणले स्वाभाविक रूपमा यी बालिकालाई सुन्दर बनाएको छ ।
अलेक्जेन्डरो टिकटकमा पनि स’क्रिय छिन् । उनि निरन्तर आफ्ना टिकटक भिडियो आफ्नो फेसबुक, इन्स्ट र टिकटकमा सेयर गर्दै आएकि छिन् । अहिले सामाजिक सञ्जाल क्रेज यसरी बढ्दैछ कि थोरै मानिस मात्र यसबाट अछूतो छन् । विश्वको ठूलो जनसंख्या सामाजिक स’ञ्जालमा प्रत्यक्ष जोडिएको छ जसका कारण संसार निकै साँघुरो भैसकेको छ ।
कोसौं टाढा घटेका घटना क्षणभरमै संसारभर एकैपटक भाइरल हुन्छन् । दशकौंअघि छुटेकाहरू पुन भेटिन्छन्, को–कहाँ कसरी के गर्दैछ भन्ने कुरा भेटेर वा फोन गरेर बताइरहनु पर्दैन, एउटै क्लिकमा ब्रह्माण्ड भेटिन्छ आफ्नै कोठाको ओछ्यानमै बसी बसी । यस क्रममा नेपाली महिलाहरू पनि सोसल नेटवर्कमा निकै सक्रिय देखिन थालेका छन् । उनीपनि यस्तै एक भाईरल फुच्ची हुन् ।
९ जना युवती एकसाथ विहे गरेर मोडलले चकित पारे : फेरी २ जना थप्ने कारण खुल्दा दुनियाँ हैरान